Faa’idooyinka biyaha u leeyahay noolaha, iyo waqtiga ugu habboon oo cabidiisa waxtar leedahay… – Hagaag.com
Faa’idooyinka biyaha u leeyahay noolaha, iyo waqtiga ugu habboon oo cabidiisa waxtar leedahay…
Posted on 11 Janaayo 2020 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Biyaha ayaa ah shey muhiim u ah nolosha oo dhan, mana jiro noole biyo la’aan noolaan karo. Biyuhu waxay ka kooban yihiin 60% jirka qofka weyn, waana mid gabi ahaanba lagama maarmaan u ah shaqeynta saxda ah ee jirka.
Sababtan awgeed, biyuhu muhiim maahan oo keliya, waxay sidoo kale faa’iido u leeyahay jirka bini-aadamka haddii si wanaagsan loo isticmaalo iyo waqtiga saxda ah.
Dhammaan khubarada caafimaadku waxay isku raacsan yihiin in biyuhu faa’idooyin u leeyihiin jirka bini’aadamka. Xaqiiqdii, biyuhu waxay jirka ka ilaalinayaan caafimaad darada, sidaa darteed waxaa muhiim ah in la ogaado waqtiga ku habboon ee la cabbo biyaha, inkastoo waqti kasta oo habboon yahay.
Waqtiyada ugu fiican:
Xaqiiqdi, waqtiga ugu fiican ee la cabi karo biyaha waa subaxdii isla markii aad toosto, wuxuu jirka ka nadiifiyaa waxyaabaha sunta ah ka dib markii aadan waxba cunin inta aad hurdeysay. Waxaa lagugula talinayaa inaad cabto koob ama laba biyo ah markii aad toostid, sug inta u dhexeysa 30 ilaa 45 daqiiqo kahor intaadan cunin quraacda subaxnimo, wuxuu qoyaa naftaada maalintaasi oo dhan.
Waxaad ka heli kartaa timo jilicsan, oo caafimaad leh.
Wuxuu ilaaliyaa qoyaanka maqaarka, sida ay sheegeen saynisyahano, cabitaanka biyo kugu filan waxay u horeedaa maqaarka qoyaan, sidaa darteedna waxay ka hortageysaa oo yaraysaa muuqaalka kaduudka jirka. Qoyaan ayuu ka helaa maqaarka, wuu jilciyaa isla markaasina dhalaaliyaa, halka maqaarka qallalan uu leeyahay halis weyn oo kugu badato kor jijabka deg degga ah.
Miisanka ayuu yareeya – cabitaanka biyo ugu yaraan 30 daqiiqo kahor intaadan cunin cunnadu waxay sare u qaadaa miisaankaaga oo yaraada. Sidaa darteed, cabitaanka biyaha marka aad hurdada ka kacdo waxay kaa caawineysaa inaa ku yareyso dhexdaada. Waxay kaloo ku siineysaa inaad dareentid deganaansho kaa celisa inaad cunto quraac badan isla markaana kaa yareyn doonta inaad cunto cuno fudud inta u dhexeysa cuntada.
Kahortaga caabuqyada kaadi mareenka, marka loo eego daraasadaha, cabitaanka biyo kugu filan waxay la xiriiraan yareynta halista cudurada kaadi mareenka, maadaama ay gacan ka geysaneyso daweynta caabuqyadaas isla markaana ay dardar geliso soo kabashada.
Dhagxaanta kelyaha, waxaa daraasado lagu ogaaday in cabitaanka biyo kugu filan ay gacan ka geysan karaan ka hortagga dhagxaanta kelyaha inay sameeysmaan.
Daaweynta laabjeexa, sida cilmi baarayaashu ogaadeen in cabitaanka galaas biyo ah uu yarayn karo aashitada ama gaaska caloosha isla mar ahaantaana gacan ka geysanaya la dagaallanka gubashada.
Wuxuu kor u qaadaa dheef-shiidka, maadaama la cadeeyay in biyaha la cabo ay gacan ka geysan karaan kordhinta dheef-shiidka kiimikadka jirka, sidaas darteedna u oggolaado jirkaaga inuu qabto howlihiisa oo uu sifiican u gubo dufanka, maadaama uu suurtagelinayo inuu yareeyo miisaanka.
Wuxuu Xoojiyaa nidaamka difaaca jirka.